ဦးဇော်: ပြာသိုလပြည့်နေ့ (သို့) မြန်မာတို့ရဲ့ အမေများနေ့
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိခင်များနေ့ကို ဆရာကြီးဦးသုခက စတင် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုနေ့သည် ပြာသိုလပြည့်နေ့ ဖြစ်သည်။
မိခင်များနေ့ စတင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာ စာရေးဆရာမ၊ ကထိက၊ လူမှုရေး ပြုပြင်ရေးသမားဖြစ်သူ မစ္စဂျူလီယာသည် ဘောစတွန်မြို့ရှိ သူမ၏နေအိမ်၌ မိခင်များနေ့ကို (၁၈၇၂) ခုနှစ်တွင် စတင် ကျင်းပခဲ့သည်။
သူမသည် နေအိမ်၌ မိခင်များနေ့ကို တစ်ကိုယ်တော် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး (၁၈၈၇) ခုနှစ်တွင် တင်တပ်ကီပြည်နယ်မှ ကျောင်းဆရာမ မေရီဆင်သိန်းသည် မစ္စဂျူလီယာ၏ တိုက်တွန်းချက်ဖြင့် မိခင်နေ့ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုသို့ပင် (၁၉၀၄) ခုနှစ်တွင် အင်ဒီယားနားပြည်နယ်မှ ဖရင့်စ်အီဟဲရင်သည်လည်း မိခင်များနေ့ကို ကျင်းပခဲ့ပြီး သုံးနှစ်အကြာ ဖီလာဒဲလ်ဗီးယားပြည်နယ်မှ မစ္စစ်အင်နာဂျားဗစ်ဆိုသူက (၁၉၀၇) ခုနှစ်တွင် မိခင်များနေ့ကို ယင်းထက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်စေရန် ကြိုးစား အားထုတ်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ မိခင်များနေ့ (သို့) အမေနေ့ကို မေလ၏ ဒုတိယတနင်္ဂနွေနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီး ဖီလာဒဲလ် ဗီးယားပြည်နယ်က ပထမဦးဆုံး အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး (၁၉၀၈) ခုနှစ်၊ မေလ (၁၀) ရက်ကို မိခင်များနေ့အဖြစ် ကျင်းပခဲ့သည်။
ဖီလာဒဲလ်ဗီးယားပြည်နယ်မှ မစ္စစ်အင်နာဂျားဗစ်သည် အခြားပြည်နယ်နှင့် တိုင်းတွေကပါ မိခင်များနေ့ကို ကျင်းပလာစေရန် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသည့် နယ်ပယ်တို့မှ သြဇာရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များကို စာနဲ့တစ်မျိုး ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး၍တစ်ဖုံ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကာ (၁၉၁၄) ခုနှစ်တွင် မိခင်များနေ့ကို အခြားသော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းတွေကပါ အသိအမှတ်ပြု ကျင်းပလာခဲ့ကြောင်း လေ့လာ သိရှိရသည်။ အမေရိကန်သမ္မတကြီး ဝူးဒရိုးဝီလ်ဆင်သည် ကွန်ကရက်လွှတ်တော်၌ “ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးမိခင်ဖြစ်သည့် သင်၏မိခင်ကို ဂုဏ်ပြုလျက်” စသည်ဖြင့် မိခင်နေ့ကို ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ကာ ယင်းအချိန်မှ စတင်၍ လက်တင်အမေရိကနှင့် အရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံများတွင် မေလ၏ ဒုတိယတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း မိခင်များနေ့ကို ယနေ့အထိ ကျင်းပလာခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာ့ရေမြေစရိုက်၊ သဘာဝနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် ပြာသိုလပြည့်နေ့တိုင်းတွင် မိခင်များနေ့အဖြစ် ကျင်းပလာခဲ့သည်မှာ “အမေနေ့အစ ဆရာကြီးဦးသုခက” ဟု မှတ်သားဖူးခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်တွင် အမေနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ရာ၌ အမျိုးသားစာဆို စာရေးဆရာကြီး ဦးသော်ဇင်၊ စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်ဦးစန်းငွေ၊ စာရေးဆရာကြီး ဦးရန်အောင်၊ စာရေးဆရာကြီး တက်တိုး၊ စာရေးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ၊ စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်စောမုံညင်း၊ စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်စသည့် စာပေ ပညာရှင်များက ဆရာကြီးဦးသုခနှင့် တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်၍ ပြာသိုလပြည့်နေ့တိုင်းကို အမေနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာကြီး ဦးသုခသည် မိခင်ဖြစ်သူကို ကျိုက်လတ်တွင်ထားခဲ့ပြီး သားဖြစ်သူကို လွမ်းနေရသော မိခင်၏ ကြေကွဲခံစားချက်များသည် မြန်မာပြည်တွင် အမေနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဆရာကြီးဦးသုခ ရင်ထဲ၌
ကိန်းဝပ် အစပျိုးခဲ့ကြောင်း၊ ဆရာကြီးဦးသုခသည် ရင်ထဲမှ ခံစားချက်များကို ပရိသတ်များထံ လိုက်လံဟောပြောကာ အမေ့မေတ္တာ ပြန့်ပွားရေးကို စတင် လှုံ့ဆော်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း၊ ဆရာကြီးဦးသုခက အမေနေ့အကြောင်း မိခင်မေတ္တာကို ဟောပြောစဉ် သီချင်းကိုလည်းဆို၊ ပြောလည်းပြော၊ ငိုလည်းငို၍ ဟောပြောစဉ် ပရိသတ်သည် မလှုပ်မယှက် ငြိမ်သက်နေခဲ့ကြောင်း မှတ်သားခဲ့ဖူးသည်။
ပြာသိုလပြည့်နေ့တိုင်းကို အမေနေ့အဖြစ် ကျင်းပနိုင်ရန် စာပေပညာရှင်များက ကြိုးစားနေကြစဉ် (၁၉၉၅) ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမှ အမေကိုမြတ်နိုးသူများက ဆရာကြီးဦးသုခအား အမေနေ့ သတ်မှတ်ပေးရန် ပူဆာ တိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် မန္တလေးမြို့တွင် ဆရာကြီးဦးသုခ ကိုယ်တိုင် ဟောပြော၍ ပြာသိုလပြည့်နေ့ကို “အမေနေ့” အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ “အမေနေ့” ကို ပြာသိုလပြည့်နေ့အဖြစ် အတည်ဖြစ်စေရန် (၁၉၉၆) ခုနှစ်တွင် ဆရာ ဦးသုခသည် ဆရာချစ်စံဝင်းအား အားပေးဆော်သြခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် စာပေလောက၊ အနုပညာလောကနှင့် ကျန်းမာရေးလောကမှ တတ်သိပညာရှင်များ စုပေါင်းကာ ရွှေတိဂုံဘုရားအရှေ့ဘက်မုခ်တွင် အမေနေ့အဖြစ် ဆရာချစ်စံဝင်းက ထပ်မံကျင်းပ၍ ဟောပြောခဲ့သည်။ အမေနေ့တွင် အဝေးရောက် သားသမီးများသည် မိခင်ထံသို့ စာရေးခြင်း၊ ပို့စကတ် လက်ဆောင်ပေးပို့ခြင်း၊ ဖုန်းဆက်၍ စကားပြောခြင်း၊ မိခင်နှင့် အတူရှိသော သားသမီးများသည်လည်း အမေကိုရေမိုးချိုးပေးကာ ဝတ်ကောင်းစားလှများ ဝတ်ဆင်ပေးခြင်း၊ အမြဲလိုလို တစ်နှစ်တာပတ်လုံး မီးဖိုချောင်ထဲ၌ ချက်ပြုတ်နေသော အမေကို မီးခိုးငွေ့ကင်းစင်သော ဟိုတယ်ကြီးများ၊ စေတီပုထိုးများသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း စသည်ဖြင့် အမေနေ့တွင် အမေကို ရိုသေမြတ်နိုး လေးစားကြည်ညိုသူများက လူမျိုးဓလေ့ ယဉ်ကျေးမှုအလိုက် အမေများကို ဂရုတစိုက် ပြုစု စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြသည်။
ရက်ပေါင်း (၃၆၅)ရက်တွင် အမှတ်တရ နေ့ထူးနေ့မြတ်များမှာ သူ့နိုင်ငံနှင့်သူ၊ သူ့လူမျိုးနှင့်သူ၊ သူ့ဓလေ့စရိုက်နှင့်သူ၊ သူ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သူ အမျိုးမျိုး ရှိကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွင်လည်း လအလိုက် ပွဲတော်များရှိသလို နေ့အလိုက် သတ်မှတ်ရက်များ ရှိကြသည်။ နေ့အလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်များထဲတွင် မိခင်များနေ့ (သို့) အမေနေ့ကို လူငယ်အချို့ မေ့ကောင်းမေ့နေကြသလို သတိရကောင်း ရနိုင်ကြသူများလည်း ရှိပေလိမ့်မည်။ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)ရက်၊ ချစ်သူများနေ့ကို လူငယ် တော်တော်များများ သတိတရရှိကြသလို တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ကျော်တစ်ရက်၊ ခရစ္စမတ်၊ New Year စသည့် ရက်များကိုလည်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ရှိကြမည်မထင်။ အတုယူသင့်သည်ကို ယူရမည့် ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (အသည်း) ၏ မွေးနေ့ပွဲသည် အမေကို ရိုသေမြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသူများအတွက် ပီတိဖြစ်ရသည့် မွေးနေ့ပွဲလေး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ (၁၁) ရက်၌ ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆရာဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်း) က မွေးနေ့ပွဲတွင် အမေဆိုသော စကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ရှာဖွေ၍ မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ပြန်လည် ဝေငှခဲ့သည်။
M = is for the million things she gives us. အမေက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးခဲ့တဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော အရာတွေ ... O = means only that she's growing old. သားသမီးတွေအတွက် ပေးဆပ်ရင်း အိုမင်းသွားတဲ့ အမေ ... T = is for the tears she shed to save us. သားသမီးတွေအတွက် အမေကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည် ... H = is for her heart of purest gold. အမေ့ရဲ့ ရွှေစင်နှလုံးသား ... E = is for her eyes, with love sight. မေတ္တာကြင်နာခြင်း အပြည့်အဝနှင့် စောင့်ရှောက် ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ အမေ ... R = means right she'll always be. အမြဲတမ်း မှန်ကန်သော အမေ့ ဆုံးမစကားများ ...
အထက်ပါ Mother's Definition အမေဆိုသော စကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်များသည် Mr.Howard Johnson ရေး၍ အရှင်က္ကန္ဒစာရ (မုံရွာ) ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ မိခင်များက ကိုးလလွယ်၊ ဆယ်လလွယ်ကာ ကျွန်တော်တို့ကို မွေးထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် လူ့လောကထဲသို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။ လူ့လောကထဲတွင် ကျွန်တော်တို့သည် မိခင်က မွေးလိုက်သည့် နေ့ရောက်တိုင်း ရောက်တိုင်း မွေးနေ့တွေကို အကြိမ်ကြိမ် အလီလီ ပြုလုပ်လာခဲ့ကြသည်။ တချို့မှာ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်မှာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အစားအစာနဲ့ မွေးနေ့ပွဲ Dinner ပေးတယ်။ တချို့က သာမန်ရိုးရိုး ဘုရားကျောင်း ဆွမ်းပို့ကြတယ်။ တချို့က ကိုယ့်မွေးနေ့ကိုယ် မသိချင်ယောင် ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ တချို့က ကိုယ့်မွေးနေ့ကိုယ် မေ့နေကြတယ်။
အမေကို တန်ဖိုးထား ရိုသေမြတ်နိုးသူများက “အမေ” ဆိုသော စကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို နောက်တစ်မျိုး ဖွင့်ဆိုထားကြပြန်သည်။
M - She gaves million of smiles to me သားသမီးတွေကို အမြဲ ပြုံးရွှင်နေစေတယ် O - Only that she is growing old တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ အိုလာမှာ ဖြစ်တယ် T - For the tears she had to save me မျက်ရည် မကျအောင်၊ ဝမ်းမနည်းရအောင် စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်တယ် H - For her heart as pure as gold အသည်းနှလုံးဟာ ရွှေအစစ်လို အဖိုးတန်တယ် E - Every thing she's done to help me အခက်အခဲ မှန်သမျှကို ကူညီဖို့ အသင့်ပဲ R - Right and Right she always be သားသမီးတွေအတွက် အမှန်တရားကိုသာ ရှေ့ရှုတယ်
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြော၍မကုန်သော အကြောင်းအရာမှာ မိခင်အကြောင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းတွင် အမေများ ရှိကြပေလိမ့်မည်။ ဖခင်မပေါ်ဘဲ မွေးသည့် သားသမီးများသာ ရှိနိုင်ကြပြီး မိခင်မပေါ်ဘဲ မွေးသည့် သားသမီးများ ရှိကြမည် မဟုတ်ပါ။ (အနည်းငယ် ရိုင်းသွားလျှင် ခွင့်လွှတ် နားလည်ပေးစေချင်ပါသည်။) မိခင်တစ်ယောက်၊ အမေတစ်ယောက်၏ သားသမီးများအပေါ် ထားသည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် တုနှိုင်းမရ အနန္တဆိုသည်မှာ အကျယ်ချဲ့၍ ပြောစရာလိုမည် မထင်။
မိုးညှင်း ဦးဣန္ဒြိယရေးသည့် “အမေဟူသည် မှတ်ကျောက်” စကားစုလေးကို ဖတ်ကြည့်စေချင်သည်။ “လောကမှာ လူတော် လူကောင်းကို ကြည့်ချင်ရင် အမေကို ဆက်ဆံလေးစားတာနဲ့ မှတ်ကျောက်တင်ရတယ်။ အမေ့ကျေးဇူးသိပြီး အမေ့စကား နားထောင်သူဟာ မဆင်းရဲဘူး။ အမေဆိုတဲ့ ဝေါဟာရမှာ “အမ= မစသူ”၊ “အမိ= ကိုးကွယ်ရာ အရှင်သခင်”၊ “အမေ= အမွန်အမြတ် ပုဂ္ဂိုလ်” လို့ အဓိပ္ပာယ်သုံးခု ပါရှိနေတယ်။ ဒါကို သတိထားကြ” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ မိခင်၏ မေတ္တာ၊ မိဘ၏ မေတ္တာများကို အချို့က မိခင်၏ကျေးဇူး၊ မိဘ၏ ကျေးဇူးကို ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်မှ မိခင်ဖြစ်မှ နားလည်တော့တယ်ဟု ဆိုကြသည်။ ဤသည်ကို ဆရာမောင်ဒီပ (သိပ္ပံ/ချည်မြေ) က မိဘမေတ္တာဆိုသည်မှာ ကိုယ့်မှာရှိသည့် အသိဉာဏ် ပမာဏလောက်နှင့် စေ့ငုစဉ်းစား ကြည့်ရှုတတ်လျှင် မြင်သာထင်သာသည့် အရာမျိုးဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသည်မှာ စဉ်းစားမိဖို့နှင့် ဆင်ခြင်မိဖို့သာ လိုအပ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်မှ မိခင်ဖြစ်မှ နားလည်မည်ဆိုလျှင် နားလည်သင့်သည့် အချိန် အတိုင်းအတာနှင့်စာလျှင် နောက်ကျလွန်းလှသည့် သိနားလည်မှုမျိုးဖြစ်ကြောင်း“အမေဟူသည်မေတ္တာပင်လယ်” စာအုပ်၌ စကားဦး ရေးသားခဲ့သည်။
အမေနှင့် ပတ်သက်လျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည့် ပညာရှင်များ၊ ဘာသာရေး ဆရာများက အမျိုးမျိုး အမေ့ကျေးဇူး မေတ္တာများကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ခဲ့ကြသည်။ နိုဘယ်လ်ဆုရ ခရစ်ယာန် သီလရှင်ကြီး “မာသာထရီဆာ” သည် မိခင်မှ ဆုံးမစကား ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း “သမီးဘဝမှာ အောင်မြင်သူအဖြစ်ကို မလိုလားရဘူး။ ဘဝမှာသစ္စာတရား လက်ကိုင်ထားပြီး စွန့်လွှတ်သူဘဝ၊ အနစ်နာခံသူဘဝ၊ ခွင့်လွှတ်တတ်သူဘဝ အဆင့်အတန်း မှာသာ နေထိုင်ရမယ်” ဟူသည့် ဆုံးမစကားအတိုင်း ဆင်းရဲသား ဒုက္ခိတများကြား အကူအညီပေးခဲ့ပြီး နိုဘယ်လ်ဆု ရရှိခဲ့သည်အထိ မိခင်၏ ဆုံးမစကားများက ခွန်အား တိုးစေခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
မေတ္တာသုတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ “မာတာယထာ နိယံပုတ္တ မာယုသာ၊ ဧကပုတ္တ မနုရက္ခေ” ဆိုပြီး မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်ကို ဥပမာပေးပြီး ပြောထားတာ ရှိတယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ တစ်ဦးတည်းသောသားကို အသက်ပေးပြီး စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ မိခင်စိတ်ဟာ မေတ္တာမှန် ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အစ်မေကလည်း သူ့ရဲ့မေတ္တာကို အသက်ပေးပြီး ပြဖူးတယ်။ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ သနော်သနော့ ကျေးရွာက ကျွန်တော် မွေးဖွားတဲ့ရွာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် (၄/၅) နှစ်အရွယ်မှာ အပြင်ထွက်ပြီး လမ်းမှာ တစ်ယောက်တည်း ကစားနေတယ်။ နွားသိုးတွေက လိုက်တော့ လူတွေက အိမ်/ခြံထဲ ဝင်ပြေးကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လမ်းမှာ အံ့အားသင့်ပြီး ထိုင်နေတယ်။ မိနစ်ပိုင်းမှာ အမေက ကျွန်တော့်ဆီ လာပြီးပွေ့ချီပြီး အိမ်ထဲ ပြန်ခေါ်သွားတယ်။ မိနစ်ပိုင်းလောက် နောက်ကျရင် နှစ်ဦးလုံး သေနိုင်တယ်။ မိခင်တစ်ယောက်ဟာ တစ်ဦးတည်းသောသားကို အသက်စွန့်ပြီးတော့ ကယ်ဆယ် စောင့်ရှောက်တာကို မိခင်မေတ္တာ အစစ်အမှန်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
အမေ့အကြောင်း ပြောလျှင်ဆုံးမည်ထင်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဖူးသည်ထဲမှ လေ့လာ၍ ဆရာချစ်စံဝင်း ဟောပြောခဲ့သည့် အထဲမှ မှတ်သားဖွယ် အချက် (၅) ချက်ဖြင့် နိဂုံး ချုပ်ပါရစေ။
သားသမီးများဆီမှ မိဘများ မျှော်လင့်သည့် မျှော်လင့်ချက်(၅)ချက်
(၁) မိမိတို့ အိုးမင်းမစွမ်း ရှိလာတဲ့အခါ မိမိတို့ကိုသားသမီးတို့က ကူညီကြမယ်လို့ တိတ်တခိုး မျှော်လင့်တတ်ကြခြင်း၊
(၂) သားသမီးများသည် မိမိတို့၏ အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်ကို စောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြခြင်း၊
(၃) မိမိတို့ နာမကျန်း ဖြစ်သည့်အခါ သားသမီးများက ပြုစုကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ခြင်း၊
(၄) မိမိတို့ တရားသဖြင့် ရှာဖွေထားသော ပစ္စည်းဥစ္စာများကို စောင့်ရှောက်ပြီး တိုးပွားအောင် ဆောင်ရွက်၍ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ခြင်း၊
(၅) မိမိတို့ မရှိသည့်နောက် သေလွန်ပြီးသည့်အခါ သားသမီးများသည် မိမိတို့ကို ရည်စူး၍ ရောက်ရာအရပ်မှ သာဓုအနုမောဒနာ ပြုနိုင်အောင် အမျှအတန်း ဝေကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ခြင်း
စသည့် အချက်(၅)ချက်သည် မိဘများက သားသမီးများထံမှ တိတ်တခိုး မျှော်လင့်ကြသည့် အချက်များဖြစ်ပြီး အမေကို ရိုသေမြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသူများ ဖြစ်နိုင်ကြစေရန် (၂၀၁၂) ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့် အမေနေ့ကို ရည်စူးလျက် ...
ဘယ်လောက်ပင် တိုင်းတား တိုင်းတာ ဘယ်လိုပင် နှိုင်းဆ နှိုင်းဆ မည်သို့ပင် ပေးဆပ် ပေးဆပ် မည်မျှပင် ဝေငှ ဝေငှ ထိုမေတ္တာတရား၏ ရင်ခွင်အလယ်မှာ အသင်တို့၊ ငါတို့ မည်သို့ ဆန်တက်ကြမည်နည်း
Posted by ဦးဇော် (သိသမျှ) at 00:53